Posted by: chhepyastra weekly | जनवरी 3, 2011
जनसंविधान निर्माणमा कुनै सम्झौता गरिन्न
खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, पोलिटब्युरो सदस्य- एकीकृत नेकपा माओवादी
०	गोरखाको पालुङटारमा सम्पन्न छैठौ विस्तारित बैठक पछि माओवादी पार्टीको स्थिति झनै खस्कादै गयो भन्ने प्रचारमा आइरहेको छ नि ?
एक्काइसौ शताब्दीको विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विचार र विकासको दृष्टिले क्रान्तिकारी लाइन, क्रान्तिकारी रणनीति र कार्यनीति विकासको दृष्टिले यो उचाइको बहस भएको सम्भवतः हाम्रो पार्टीको छैठौा विस्तारित बैठक पालुङटारमा नै हो । त्यसकारण यस बैठकको वैचारिक उचाइ राजनीतिक उचाइ र गरिमा महान् छ । महान् विचारधारात्मक बहस र महान् राजनीतिक बहसको प्रतिनिधित्व गर्ने काम पालुङटार बैठकले गरेको छ । माक्र्सवादीहरूले यही रूपमा हाम्रै छैठौा विस्तारित बैठकलाई बुझ्छन् र गर्व गर्छन्, प्रतिक्रियावादीहरू आतंकित छन्, अवसरवादीहरू यसको गलत ढङ्गले व्याख्या गर्ने र छैठौा विस्तारित बैठकको उचाइलाई गिराउने मूर्खता पनि गरिरहेका छन् । पालुङटार बैठकले हाम्रो पार्टीलाई झनै शक्तिशाली बनाएको छ । पालुङटार बैठकले अबको कार्यदिशा जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहमा जाने हो भनेर स्पष्ट व्यख्या गरेको छ । हाम्रो कार्यनीति जनगणतन्त्रको स्थापना र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने म्यान्डेट छैठौा विस्तारित बैठकले दिएको कार्यदिशाको संगठनको ढााचा अनि संगठनको नेतृत्वलाई विकास गर भन्ने म्यान्डेट पनि त्यस बैठकले दिएको छ । पालुङटार बैठकले हामी पााच-छवटा म्यान्डेट दिएको छ । हाम्रो पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यदिशाको कार्यनीतिको अनि कार्ययोजनाको कुरामा क्रान्तिकारी संश्लेषण गरेको छ । यो हाम्रो पार्टीको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यदि योजना मुताबिकको नेतृत्व र संगठनको ढााचा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी स्थायी समितिलाई जिम्मा दिइएको छ । त्यसकारण, पालुङटार बैठकले क्रान्तिकारीहरूलाई उद्वेलित र उत्साही बनाएको छ, नेपाली जनतालाई आशावादी बनाएको छ, देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू आतंकित भएका छन् भने अवसरवादीहरू जो हाम्रो विचार र क्रान्तिलाई गोलचक्करवादमा फसाउने र सुधारवादको दल-दलमा जाक्ने जुन दिवा सपना देखेका थिए तिनीहरू पनि नाङ्गेझार भएका छन् । त्यसकारण पालुङटारको छैठौा विस्तारित बैठक पछि पार्टी झनै जोडतोडका साथ अगाडि आएको छ, पार्टी झनै शक्तिशाली भएको छ ।
०	तर यस बैठकपछि पार्टीका नेताहरू त एक आपसमा खुट्टा तानातानमा लागेका छन् भनिन्छ नि ?
सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा समस्याहरू देखा पर्छन् । त्यसबाट थोर-बहुत रूपमा हाम्रो पार्टी पनि अछुतो रहने कुरा भएन । तर, अहिलेको हाम्रो बहसले पार्टीभित्रको विचारको स्वतन्त्रतालाई सम्मान र संस्थागत गर्न सक्नुपर्छ । पार्टीभित्र चल्ने बहसलाई स्वच्छ मर्यादित, तार्किक र वस्तुसङ्गत बनाउादछ । यस्तो विधिको आधारमा पार्टीभित्र बहस चलाइयो भने पार्टी एकपछि अर्को रूपान्तरण, नयाा र सुदृढ भएर पार्टी अगाडि बढ्छ । यही विधिलाई पार्टीभित्र लागू गर्ने क्रममा हाम्रो कमी भएकै छ । त्यही कमजोरीका केही संकेतहरू देखा पनि परेको छ । तर, हामीलाई पालुङटार र त्यसपछिको केन्द्रीय समिति बैठकले छूट दिएन । राम्रोसाग बहस गर, संघर्ष गर अनि एकताबद्ध होउ, यसको विकल्प छैन भन्ने म्यान्डेट हामीलाई पालुङटार बैठकले दिएको छ । त्यसैले पार्टीभित्र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले ठाउा पाउादैन र ठाउा दिनुपनि हुादैन ।
०	अनमिनको म्याद अब छिट्टै सकिादैछ, तपाईंहरूले एकातर्फी रूपमा अनमिनको म्याद थपको लागि संयुत्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पनि पठाइसक्नु भएको छ, अनमिन फिर्तीपछिको अवस्था के होला ?
अनमिन नेपालमा आपैFm आएको होइन, हामीहरूले नै यहााको शान्तिप्रक्रियामा सहयोग गर्न बोलाएका हौा । हामीलाई चाहिएको बेलामा अनमिनलाई नेपालमा राख्न सकिन्छ, उसलाई तपाईंहरूको काम यहाा सिद्धियो अब जानुस्भन्दा ऊ जान्छ । अनमिनलाई नेपालमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा हाम्रो देशको राजनीतिक आवश्यकता र राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो । अनमिन यहााबाट जाादैमा भोलिपल्टबाटै यहाा युद्ध भइहाल्छ । आतंक फैलन्छ भन्ने पनि सही कुरा होइन । अनमिन भयो भने यहाा चीरकालसम्म पनि शान्ति हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि गलत हो । अनमिनको भूमिकालाई लिएर विशेषगरी दलाल तथा नोकरशाहीवर्गले अनमिनलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट पठाएर देशलाई पुनः युद्धमा धकेल्ने हर्कतहरूलाई अनुकूल वातावरण जुन बनाउन खोजिएको छ, यस्तो अवस्थामा अनमिन रहादा नै राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको जुन भनाइरहेको छ, त्यो सापेक्षित दृष्टिले सही छ । अनमिनले अहिले नेपाल सेना र जनमुक्ति सेना दुवैलाई अनुगमन गरिरहेको छ । अनमिन यहााबाट बाहिरियो भने नेपाली सेनालाई अनुगमन गर्ने अर्को कुनै निकाय हुादैन, नेपाली सेना स्वतन्त्र हुन्छ । त्यसपछि अर्को कुनै छुट्टै निकाय बनाएर जनमुक्ति सेनालाई मात्र अनुगमन गर्ने भन्ने जुन चिन्तन छ, यसले शान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्याउने र जनसंविधान निर्माण गरेर अगाडि जाने वर्तमान आवश्यकताको विरुद्ध आˆना हर्कतहरू बढाउनको लागि अहिले अनमिनलाई नेपालबाट फिर्ता पठाउने प्रस्ताव गरेको हुनाले हामीले अनमिनलाई शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता नपाउादासम्म यहीा रहन पत्र पठाएका हौा ।
०	अहिले जनयुद्धकालमा माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाले पुनः उल्ट्याइादैछ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
यो सरकार शान्तिसम्झौताको ठाडो उल्लंघन हो । यसले मुलुकलाई पुनः युद्धमा धकेल्ने हर्कतको काम गर्छ । नेपाली जनताले अब बुझ्नुपर्छ कि को शान्तिको पक्षपाती हो र को विरोधी हो । यी कुरा नेपाली जनताले स्पष्टरूपमा बुझ्नैपर्छ । अब नेपाली जनताले शान्ति भााड्न खोज्ने जनसंविधान विरोधीहरूको विरुद्ध एक पटक एउटा आन्दोलनको आाधी-बेहरी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन ।
०	काम चलाउ सरकारले माओवादीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिरहेको छ, यसै सिलसिलामा तपाईंलाई गाडीसहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो भन्ने कुरा प्रचारमा आयो, वास्तविकता के हो ? प्रस्ट पारिदिनुस् न ?
बाहिर सम्प्रेषित भएको समाचार घटनाभन्दा निकै टाढा छ । ती समाचारहरू अत्यन्तै मनोगत, कपोलकल्पित रूपमा समाचार सम्प्रेषण गरिएको छ । मैले त्यो प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको गाडी दुई वर्षदेखि चढ्दै आएको हुा । मेरो गाडी बढीभन्दा बढी समय सिंहदरबारभित्र रहन्छ । मेरो मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूसाग नै कुराकानी भइरहन्छ । कर्मचारीहरूसाग पनि माथिल्लो तहसम्मकाहरूसाग छलफल हुन्छ । मेरो गाडीलाई जसरी एकाएक अवैध भनेर गिरˆतार गर्ने काम भयो, त्यो देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको नेपालको शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रिया, नेपाली जनताको स्वाभिमानीमाथिको आक्रमण हो । त्यस घटनालाई यति रूपमा बुझिदिनु हुन् र त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्न म तयार छु, त्यसमा साथ दिनु हुन सम्पूर्ण नेपाली जनतासाग अपिल पनि गर्दछु ।
०	तपाईंहरूकै पार्टीका नेताहरूमाथि पटक-पटक हातहतियारसम्बन्धी, गाडीसम्बन्धी विषयलाई लिएर हिरासतमा लिने, तारिखमा राख्ने काम भएको छ, सरकारको यस्तो शैलीले कतै शान्तिप्रक्रिया बिथोलिने त होइन ?
हामी विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि शान्तिप्रक्रिया आइसकेपश्चात् पनि हामीलाई प्रजातान्त्रिक नदेख्ने, आफू उपल्लो दर्जाको कथित प्रजातान्त्रिक कहलिने राजनीतिक चिन्तन जो छ यो चिन्तनले शान्तिसम्झौताका सहमति र सम्झौताहरूको उल्लंघन एकपछि अर्को रूपमा भएको भन्ने कुरा हामीमाथि गरिएका क्रियाकलापबाट पुष्टि हुन्छ । संसद्वादी दलहरू जो आफूलाई खााटी प्रजातन्त्रवादी भन्छन्, उनीहरू नै यतिबेला शान्तिप्रक्रिया भााड्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । उनीहरूको यस्तै तौरतरिका रहिरहने हो भने हामी पनि हातमा दही जमाएर बस्दैनौा । जसले जहिले पनि राष्ट्रघात गरे जनविरोधी क्रियाकलाप गरे, जनविरोधी क्रियाकलाप भनौा उनीहरूको धर्म हो, दिनचर्या हो, ती मान्छेहरू प्रतिक्रियावादी, अपराधीहरूले हामीलाई कहिले आतंककारी कहिले हत्यारा कहिले अवैधानिक गाडी चढ्ने भने जो बद्नाम गर्न खोजिएको छ, यो कुनै पनि हालतमा हाम्रो पार्टी र नेपली जनतालाई सैहृय हुादैन । तुरुन्त यस्ता हर्कतहरू रोक्नुपर्छ । यस्ता हर्कतहरू रोकिएन भने यसबाट निस्कने परिणामको जवाफदेही तत्तत् तत्वहरू हुनुपर्छ । यो मेरो चुनौती पनि हो ।
०	अनमिनको म्याद सकिादैछ, काम चलाउ सरकारले मुलुक चलाएको पनि छ महिना नाघिसक्यो, अझै पनि नयाा सरकार बन्ने छााटकााट देखिादैन, यस्तो अवस्थामा कतै सरकारले माओवादीलाई दमन गर्ने सोच त राखेको होइन ?
सरकारको पछिल्ला हर्कतहरूले त त्यही देखाउाछ । हामी जिम्मेवार पार्टी हुनुले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने कि बीचैमा प्रतिक्रियावादीहरूले शान्तिप्रक्रियालाई तोड्न खोज्दा तोडिन दिने भन्ने कुराको रक्षक हाम्रो पार्टी छ । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो पार्टीमा छ । सरकार र प्रतिक्रियावादीहरूका हर्कतलाई एकपछि अर्को रूपमा असफल गर्दै, जनताको चाहना मुताविक शान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्याउने र जनसंविधान बनाएर यो देशमा राजनीतिक दृष्टिले त राज्यसत्ताको दृष्टि जनताले चाहेको परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्न हामी चाहन्छौा । यदि जनताका विरुद्ध षड्यन्त्र गरियो भने राम्रोसाग प्रतिक्रियावादीहरूले हेक्का राखे हुन्छ आवश्यक पर्यो भने नेपाली जनताको काखमै बसेर अरु बीस-तीस वर्ष लडिन्छ । अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा कुनै पनि हालतमा सौदाबाजी गर्न दिइन्न । राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई कमजोर हुन दिइन्न, आवश्यक परे बलिदानी दिइन्छ । जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्ने जनसंविधान निर्माणमा कुनै सम्झौता गरिन्न । यो कुरा म नेपाली जनताको अगाडि पार्टीको तर्फबाट स्पष्टरूपमा भन्न चाहन्छु ।
०	आगामी जेठ १४ भित्रै मुलुकले नयाा संविधान पाउाछ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
मुलुकले जेठ १४ भित्रै संविधान पाउनेमा धेरै जटिलता छन् । समयअवधिको दृष्टिले त अब हामीसाग झन्डै पााच महिना छ । यो समयभित्र संविधान लेख्न सकिन्छ । तर, संसद्वादीहरू जनताको संविधान लेख्न तयार छैनन् । संविधान लेख्ने कुरा ठूलो राजनीतिक मुद्दा भएको हुनाले संसद्वादी दलहरू सााच्चिकै प्रजातन्त्रवादी नभएसम्म जनताको, संविधान लेखिने सम्भावना म देख्दिन । संविधान लेखिएन भने संसद्वाद र संसद्वादी दलका कारणले गर्दा लेखिादैन, उनीहरूले आˆनो राजनीतिक सोचलाई परिवर्तन गरे मात्र संविधान लेखिन्छ । बल अब संसद्वादीहरूकै कोटमा छ । संविधान लेखिएन भने हामी जनताको माझमा जान्छौा । तपाईंहरूले हामीलाई संविधान बनाउन पठाउनुभएको थियो, संसद्वादी दलहरूले हामीलाई संविधान लेख्न दिएनन्, अब तपाईंहरू आˆनो संविधान आफैा लेख्नुस् भनेर हामी जनतालाई अपिल गर्छौं । हामी तपाईंहरूको नेतृत्व गर्छौं भनेर हामी जनतालाई भन्छौा ।
०	तर, जनताको बीचमा जाने विषयमा तपाईंकै पार्टीभित्र गम्भीर मतभेद छ भनिन्छ नि ?
कम्युनिस्ट पार्टी भनेको बुर्जुवा पार्टी जस्तो होइन । यो जीवन्त पार्टी हो, विचारधारामा चल्ने पार्टी हो । यो पार्टी भनेको वैज्ञानिक जनवादी पार्टी हो । त्यो पार्टीले पहिला पार्टीभित्रको नेतृत्वहरूबीचको जनवादको प्रयोग गर्छ । नेतृत्व तहको जनवादको ग्यारेन्टी गरेर मात्र समाजमा जनताको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । तब मात्र त्यस्तो पार्टी जनताको पार्टी हुन्छ । हाम्रो पार्टीभित्र अहिले बहस भएको छ । पार्टीभित्रको बहसबाटै हामीले पार्टीको कार्यनीति तथा कार्यदिशा क्रान्तिकारी बनाएका छौा । क्रान्तिकारी नीतिलाई लागू गर्ने हाम्रो सिङ्गो पार्टीको अबको कार्यभार हो । पार्टीको नीति लागू गर्ने सवालमा हाम्रो पार्टीभित्र कामकारवाहीमा एकरूपताअन्तर्गतमा हामी रहन्छौा । हामी हाम्रो नीति लागू गरेर अगाडि बढ्छौा । यसमा कसैको विमति रहादैन ।
०	अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ?
अहिले मुलुक राजनीतिक दृष्टिले धेरै जटिल स्थितिमा छ । यस्तो अवस्थामा जनताले फेरि पनि माओवादी पार्टीले के स्वच्छ, के भन्छ र के गर्छ भन्ने कुरालाई अलि गहिरो ढङ्गले हेरिरहेका छन् । पार्टीभित्र पनि हामी एकपछि अर्को नीति बनाउादै अगाडि बढिरहेका छौा । यस्तो अवस्थामा म यस पत्रिकाले जुन स्थापनाकालदेखि नै नेपाली राष्ट्रको राष्ट्रियताको पक्षमा नेपाली जनताको जनवादको पक्षमा जो कलम चलाइरहेको छ, अहिले हाम्रो पार्टी र मेरो विचारहरू यो अवस्थामा जनताको बीचमा राख्ने जुन अवसर दिनुभो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।